Sofa - YiXing International Zvigadzirwa (GuangDong) CO., LTD
Sofa rinofanira kusarudza FBA yegungwa kutumira
Miss Lin mutengesi wekambani yekutengesa muDongguan, iro sofa hombe rinotengeswa pasirese. Kuti utengese pasofa zvirinani, Miss Lin vakavhura chitoro papuratifomu yeAmazon. Iye zvino anoda kutsvaga logistics kambani yekuendesa iyo sofa kuUnited States, kuitira kudzivirira kushomeka kwezvinhu. Kubudikidza nekutsvaga kwaBaidu, anogona kuwana YiXing kuti abvunze mutengo, nguva, mashandiro uye zvimwe zvinhu zveAmazon FBA kutumira kwesofa.
Zvinozivikanwa kuti muna Chikunguru, Miss Lin vakawana YiXing vatengi se Xiao Xu kuburikidza nekutsvaga kweBaidu. Mushure mekunge Xiao Xu adzidze nezvemamiriro ezvinhu chaiwo ezvinhu zvevatengi, mutengi Xiao Zhou akakumbira mutengesi mutengesi Peggy kuti agamuchire Miss Lin. Kuburikidza nekunzwisisa kwakadzama, Peggy akadzidza kuti Miss Lin zvakare vane yavo chitoro cheAmazon kuGuangzhou, iyo inogadzira masofa. Ikozvino pane angangoita mashanu kusvika kumashanu squres mudura reAmazon muLos Angeles. Mushure mekuziva mutengo uye muganho wenguva, Miss Lin vakasarudza kusarudza iyo American FBA yekufambisa chiteshi cheYiXing Global logistics.
Inotungamira Enterprise MuFBA
Zvekufambisa kweAmazon FBA kweYXL Global logistics, zvinongoda Miss Lin kuti vape ruzivo rwezvinhu zvakatarwa uye neruzivo rwakafanogadzirirwa risiti yeimba yekuchengetera yeAmazon, uye inogona kujekeswa pamusuwo pasina kudiwa kweimwe inonetsa. clearance yemagwaro. Miss Lin vanogutsikana zvakadzama neiri remhando yepamusoro sevhisi, saka vanoita sarudzo inofadza zvakadaro. Kusvika parizvino, tanga tichishanda pamwe chete tichifara.
Kambani yedu inotarisa pazvinhu zvakakura, senge masofa, midziyo yemukicheni, yekugezera seti, yekupeta matafura nezvimwe zvinhu zvakakurisa, inova sarudzo iri nani kune vatengesi veAmazon. Kuwedzera pakupa FBA yemakungwa kutumira kubva kuChina kuenda kuUS, tinokwanisa zvakare kuEuproe, Canada etc. Tinopawo imba neimba kunhonga, kurongedza, kunyora mazita kune dzimwe nyika mabasa ekuchengetera.